Hos 14 | Mal1865 | STEP | Hovaliana Samaria noho ny helony, Fa niodina tamin'Andriamaniny izy; Ho lavon-tsabatra izy, ny zanany madinika hotorotoroina, ary izay bevohoka eo aminy hotatahana.
Ny hamindran'i Jehovah fo amin'ny Isiraely, rehefa mibebaka
2 Ry Isiraely ô, miverena amin'i Jehovah Andriamanitrao, fa lavon-keloka ianao. 3 Mitondrà teny ianareo, eny, miverena amin'i Jehovah, ka manaova aminy hoe: Mamelà ny heloka rehetra, ary raiso izay tsara, ka dia haterinay ▼
▼ Heb. haloanay
ho fanatitra ▼
▼ Heb. vantotr'ombilahy
ny molotray. 4 Asyria tsy hamonjy anay, tsy hitaingin-tsoavaly izahay sady tsy hiteny amin'ny asan'ny tananay intsony hoe: Ry Andriamanitray ô; Fa ao aminao no ahitan'ny kamboty famindram-po. 5 Hositraniko ny fiodinany, ho tia azy tsy vozonana Aho; Fa efa niala taminy ny fahatezerako. 6 Ho tahaka ny ando Aho amin'ny Isiraely; Hamony tahaka ny lilia izy, ary hamaka tahaka an'i Libanona. 7 Hisandrahaka ny rantsany, ho tahaka ny an'ny hazo oliva ny hatsaran-tarehiny, ary ho tahaka ny an'i Libanona ny hanitra avy aminy.
8 Izay mipetraka ao ambanin'ny alokalony dia hampahavokatra vary indray ▼
▼ Na: ho velombelominao indray toy ny vary izy
, ary haniry tahaka ny voaloboka izy; Ny lazany ho tahaka ny an'ny divay avy any Libanona.
9 Ry Efraima ô, hataoko ▼
▼ Na: Efraima hanao hoe: Hataoko
inona intsony izay sampy? Izaho dia efa nihaino ka nitsinjo anao ▼
; Tahaka ny hazo kypreso maitso Aho, avy amiko no hahazoana ny vokatrao. Iza no hendry mba hahafantatra izany zavatra izany? Na manan-tsaina mba hahalala izany? Fa mahitsy ny lalan'i Jehovah, ary ny marina no mizotra eny aminy; Fa ny mpanota kosa dia tafintohina eny aminy.